Wednesday July 18, 2018 - 10:52:06 in Wararka by Super Admin
Kooxaha mucaaradka Suuriya ayaa ogolaaday in kumanaan kun oo maleeshiyaad shiico ah iyo ehelladooda laga daad gureeyo deegaanno dhaca Waqooyiga wadankaasi.
Wararka ka imaanaya gobolka Idlib ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ay saxiixeen heshiis dhigaya in hareereynta laga qaado laba degmo oo ay ku sugnaayeen ciidamo hubeysan iyo eheladooda taas bedelkeedna ay ogolaanayaan maxaabiis isweydaarsi xadidan.
Heshiiskan oo garwadeen ay ka tahay dowladda Turkiga ayaa fursad usiinaya maleeshiyaadka shiicada in si nabad gelya ah ay ehelladooda ugu daad gureeyaan dhanka magaalooyinka gacanta Nidaamka Bishaar Al-asad kujira.
Kooxda Hay'adda Taxriiru Shaam oo heshiiska usaxiixday dhanka mucaaradka ayaa shardi ka dhigtay in xabsiyada Nidaamka lagasii daayo illaa 1500 oo maxaabiis muslimiin suniyiin ah iyo 30 sarkaal oo kamid ah xoogaga mucaaradka.
Dadka shiicada ah ee laga daad gureynayo gobolka Idlib ayaa tiradooda lagu sheegay 6,000 oo isugu jira Maleeshiyaad hubeysan iyo dad rayid ah.
Wariyaasha ayaa soo sheegaya in daad gureynta shiicada ku go'doonsan deegaannada Kafriyah iyo Foocah ay u gogol xaareyso duullaan melleteri oo ay suurtagal tahay in ciidamada Nidaamka Bishaar Al-asad iyo maleeshiyaadka iiraaniyiinta ku qaadaan gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya dhaca.
Norway oo Xasan Cali Kheyre ku Cadaadinaysa in uu Kenya uga tanaasulo Badda Soomaaliya.